चीन २ प्लाइ भर्जिन पल्प फेसियल टिशु फ्याक्ट्री - निर्माता आपूर्तिकर्ता र थोक - क्विंगडाओ सनी फ्यूचर इन्टरनेशनल कं, लिमिटेड।
घर > उत्पादनहरू > अनुहारको टिशू > २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
हामी २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू आपूर्ति गर्दछौं। सिधा बिरूवाहरूबाट बनाइन्छ, प्राकृतिक र सुरक्षित। कम्पनीले धेरै खुद्रा विक्रेता र एजेन्टहरूसँग दीर्घकालीन र स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। घरेलु कागज र कारखाना द्वारा उत्पादित पम्प कागजात पूर्ण प्रजाति र उचित मूल्य मा छन्।
मोडेल:टिसु पेपर ० 07
हामी आपूर्ति गर्दछौं२ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू।सिधा वनस्पतिबाट बनाइएको, प्राकृतिक र सुरक्षित। कम्पनीले धेरै खुद्रा विक्रेता र एजेन्टहरूसँग दीर्घकालीन र स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। घरेलु कागज र कारखाना द्वारा उत्पादित पम्प कागजात पूर्ण प्रजाति र उचित मूल्य मा छन्। उत्पादन र उत्पादन गुणवत्ता को ध्यान केन्द्रित गर्दै, टिशू उत्पादको एक विस्तृत श्रृंखला को प्रक्रिया। हाम्रो ईमानदारी, शक्ति र उत्पाद गुणवत्ता उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त छ।
१ को उत्पादन परिचय २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
यो २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू उच्च लागत प्रदर्शन अनुपात उत्पादन हो। हामी एक व्यापक घरेलू कागज कम्पनीमा अनुसन्धान र विकास, उत्पादन, बिक्री को संग्रह हो। घरेलु ई-वाणिज्य र निर्यात व्यापारको सम्बन्धमा, हाम्रो ग्राहकहरू लामो क्षेत्र र वरपरका क्षेत्रहरूमा सीमित छैनन्, OEM कागजातको उत्पादन र निर्यात व्यापारमा संलग्न, सम्पूर्ण देश र एशियाका अन्य भागहरूमा। यदि तपाईं हाम्रो उत्पादनहरू र सेवाहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंको अनलाइन सन्देशको लागि तत्पर छौं वा परामर्शका लागि कल।
२. उत्पाद प्यारामिटर (विशिष्टता) को २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
P. उत्पाद सुविधा र को आवेदन२ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
अनुहार ऊतक कागजकुनै additives बिना, रंग प्राकृतिक हात्तीको दाँत सेतो, अपेक्षाकृत समान बनावट हुनुपर्छ। प्राकृतिक सेता, आँखा लाई धेरै मनपर्दो, सेतो धेरै सफा धेरै यस्तो चमकदार छैन।
आगोको नतीजा हेर्नुहोस्, राम्रोअनुहार टिश्यु पेपरक्लासिक्स दहन पछि सेतो खरानी फार्म देखाउँदछ। यदि यो शुद्ध कालो हो जुन रासायनिक हानिकारक पदार्थहरूको साथ जोडिएको छ, यस कागजको लगातार प्रयोग शरीरको लागि धेरै नराम्रो हुन्छ।
को अधिक सुरुचिपूर्ण स्वादअनुहार टिश्यु पेपर, लगको सुगन्धको नजिक, यो अधिक स्वच्छ र सुरक्षित छ।
को उत्पादन विवरण२ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
इस्पात-देखि-इस्पात वा इस्पात-देखि-गोंद embossing द्वारा गठन विभिन्न ढाँचा अनुहार को टिशू पेपर नरम, बलियो, र अधिक पानी शोषक बनाउँछ। कागजको प्रत्येक तह प्रयोगको बखत फैलदैन, राम्रो हात स्वच्छता सुनिश्चित गरेर। उही समयमा, उत्पादन सामग्री र निर्माण प्रक्रियाहरू पनि फरक छन्, र लागत र प्रदर्शन अधिक व्यावहारिक भएको छ, र तिनीहरू बिभिन्न प्रयोग अवसरहरूमा अधिक गुणस्तर चयनता छन्।
भर्जिन काठ काल्पनिक कागजमा लामो फाइबर, उच्च टेन्सिल फोर्स, राम्रो कडाई हुन्छ र यसलाई तोड्न सजिलो हुँदैन, जबकि खराब गुणको कागजमा अनियमित प्वाल र पाउडर हुन्छ। पसिना पसिनाले मैला छोड्दैन।
अनुहार टिश्यु पेपरकडा पानी अवशोषण संग, कागज तौलिए पानी अवशोषित गर्न सक्छन् कि धेरै पटक आफ्नै द्रव्यमान। तिनीहरूको राम्रो शोषणको कारण, कागजले अधिक ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउन सक्छ। यो हात धुने पछि पछार्ने प्रक्रियाको माध्यमबाट हुन्छ, र ब्याक्टेरियाहरू हातबाट हटाउन सकिन्छ। प्रयोग गरिएको कागज तौलिएमा स्थानान्तरण।
Product. उत्पाद योग्यता२ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
D. डेलिभर, शिपिंग र सेवा गर्दै२ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू
हट ट्यागहरू: २ प्लाई भर्जिन पल्प फेसियल टिशू, निर्माणकर्ता, आपूर्तिकर्ता, थोक, कारखाना, अनुकूलित, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीन, चीनमा निर्मित, सस्तो, छुट, सीई, फेशन, सबैभन्दा नयाँ, गुणवत्ता, उन्नत, टिकाऊ, पछिल्लो बिक्री
अनुहारको टिशू पेपरअनुहारको कागज टिशूअनुहारको टिशू बक्स पेपरअनुहारको टिशू र शौचालय कागज